Ugu yaraan sideed qof oo lagu dilay kadib weerar ay Al-Shabaab ku qaaday huteel kuyaala Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan sideed qof oo lagu dilay kadib weerar ay Al-Shabaab ku qaaday huteel kuyaala Muqdisho
June 14, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Muuqaalka qiiqa kasoo baxay weerarka huteel Boosh ee Muqdisho. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan sideed qof ayaa lagu dilay gudaha Muqdisho caawa oo Arbaco ah kadib markii gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa lagu qarxiyay huteel, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka iyo caafimaad.
Weerarka oo lala beegsaday huteel Boosh ayaa waxa weheliyay rasaas, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
In ka badan 20 qof ayaa ku dhaawacantay weerarka, sida saraakiisha caafimaadka ay u sheegeen wariyeyaasha.
Intooda badan dadka ku waxyeeloobay weerarka ayaa u badan dad shacab ah.
Ururka hubyasan ee Al-Shabaab ayaa sheegtay masuuliyada weerarka caawa oo Arbaco ah, sida ay ku warantay idaacadooda Radio Al Andalus.
Sanadkii 2011-kii, ayaa Al-Shabaab banaanka looga saaray Muqdisho, balse maleeshiyada ayaa ayaa si wada qaadida weerarada dhimashada leh ee ka dhanka ah masuuliyiinta dowladda iyo meelaha ay bulshadu isugu timaado sida huteelada iyo makhaayadaha.
Kani waxa uu ahaa weerarkii kowaad oo argagax leh oo ka dhaca gudaha Muqdisho intii lagu guda jiray bisha barakaysan ee Ramadaa.
June 15, 2017 Tirada dhimashada weerarkii huteel Boosh ee Muqdisho oo gaartay 19 qof
May 24, 2017 Ugu yaraan afar qof oo lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
September 25, 2017 Soomaaliya oo sideed safiir ku amartay in ay dalka soo galaan 30 beri gudahood
In ka badan 75 qof oo ku dhimatay diyaarad ku burburtay gudaha dalka Columbia
London-(Puntland Mirror) Diyaarad ay saarnaayeen 81 qof, oo ay kamidyihiin ciyaartoy naadi kubada cagta oo Brazil ah ayaa ku burburtay dalka Columbia, sida ay wararka sheegayaan. Booliiska Columbia ayaa sheegaya in ka badan 75 qof oo [...]